Madaweynehii Hore, Shariif Shiikh Baa Soo Dhaweeyay Heshiiska Laga Gaaray Ciidamadii Isku Horfadhiyay Muqdisho – Great Banaadir
Madaxweynehii Hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Midowga Murashixiinta Shariif Shiikh Axmed ayaa soo dhoweeyay Heshiiska laga gaaray Rabshadihii ka dhashay Muddo Kordhinta Hareermarsaneed Dastuurka Soomaaliya ee ka dhacay Magaaladda Muqdisho.
Mudane Shariif Shiikh Axmed ayaa Qoraal lasoo dhigay Barta Gaarka ah ee Facebook, ku bogaadiyay “Dadaalada Ra’iisul Wasaaraha oo uuna ka rajeyneyno in Heshiis laga gaaro Doorashooyinka, iyadoo lagu saleynayo Heshiiskii 17 Sebtember ee Sanadkii 2020”.
“Waxaan u mahad celinayaa Guddiyadii kasoo shaqeeyey Heshiiska iyo Maamulada Xubnaha ka ah Dowladda Dhexe, iyo sidoo kalena Saaxiibada Caalamka ee Waqtiga ku bixiyay in lagu laabto Heshiiskii 17 Sebtember 2020,” ayuu hadalkiisa raaciyay Mudane Shariif.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu Codkiisa ku biirinayo “In aan Ciidamada Qalabka Sida marna la siyaasadeyn oo ay ku laabtaan Xarumahoodii”.
Shariif Shiikh Axmed ayaa soo jeediyay in markale Gacmaha la isku qabsado sidii looga gudbi lahaa Marxaladdan adag ee kala guurka, iyadoo wax kasta lagu bixinayo Dib-Uheshiin, Is-Qancin iyo Isku-Tanaasul.
Hadalka Madaweynehii Hore ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed ayaa ka dambeeyay Heshiis Shalay Galab lagu gaaray Magaalada Muqdisho isla markaana ka koobmay 10 Qodob.
Qodobadi Shalay Galab (05-05-2021) lagu heshiiyay ayaa waxey u dhignaayeen sida soo socoto:
1) In dhamaan ciidamadii ku yimid xiisadaha ka dhacay magaalada Muqdisho dib loogu celiyo goobihii ay ka yimaadeen loogana saaro magaalada muddo 48 saac ah oo ka bilaabanaysa 05-05-2021.
2) In xuquuqda ciidamadaas sida mushaarka, darajooyinka iyo xilalka wax saamayn ah ku yeelanin qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho loona raacan karin wax ku saabsan dhacdadaas.
3) In si gooni ah loo xaliyo saraakiisha leh duruufaha gaarka ah, sida darajooyinka, mushaaraadka iyo xuquuqda kale ee ciidan.
4) In kalsooni laga dhex abuuro hay’adaha amniga iyo siyaasiyiinta qaba tabashooyinka amni.
5) In Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu soo saaro wareegto uu ku farayo taliyayaasha ciidamada qalabka sida.
5a) In aysan ku milmin arrimaha siyaasadda.
5b) In aysan bixin ammarro ay ka dhalan karto khalkhal amni iyo mid siyaasadeed.
6) In la magacaabo guddi khubaro ciidan ah oo kala taliya Ra’iisul Wasaaraha dib u habaynta ciidamada qaranka.
7) In aan ciidamada qalabka sida loo adeegsan arrimo siyaasadeed, faragalinna lagu samayn.
8) In dhamaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadalada abuuri kara colaad iyo nacayb.
9) In lasoo celiyo gaadiidka iyo hubka gaarka loo leeyahay ee lagu kala qaatay dagaaladii ka dhacay Muqdisho lana soo daayo dadkii loo xiray.
10) Fulinta qodobadaan waxaa masuul ka ah Ra’iisul Wasaaraha iyo xukuumadiisa.